पटक–पटक फुट्दै र जुट्दै आएको राप्रपा एकता आज – GoldenKhabar.com
पटक–पटक फुट्दै र जुट्दै आएको राप्रपा एकता आज
कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र पशुपति शमशेर राणा तथा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी राप्रपा संयुक्त अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच आज बुधबार एकता घोषणा हुँदै छ ।
एकता घोषणा १२ बजे राष्ट्रियसभा गृहमा गर्ने तयारी छ । गत शनिबार राति तीन अध्यक्षबीचको एकता आधारपत्र सहमतिपछि एकता टुंगो लागेको हो । सहमतिअनुसार एकतापछि राप्रपामा तीन अध्यक्ष रहने छन् ।
‘केन्द्रीय समितिको आकार कस्तो र कत्रो हुने ? अन्तिम टुंगो लागेको छैन, सहमती आधारपत्र अनुसार जिम्मेवारी तीन अध्यक्षलाई नै छ,’ प्रवक्ता पाठकले भने । आधारपत्रअनुसार हाल कायम तीनै दलका निर्वाचन चिह्न ६ महिनाका लागि स्थगन गरिएको छ । तर, झण्डा भने थापा नेतृत्वले प्रयोग गर्दै आएको राप्रपाकै राखिने भएको छ ।
यसैगरी, दुबै दलको विधान सामन्जस्य गरी एकीकृत नया“ विधान बनाउने सहमति बनेको छ । अहिलेका लागि भने राप्रपा विधानलाई अन्तरिम मानिएको छ । ६ महिनाभित्र विधान कमिटीले प्रस्ताव गर्ने छ । सहमतिअनुसार डेढ वर्षभित्र एकीकृत महाधिवेशन गरिनेछ । २०४७ सालमा गठित राप्रपा यसबीच पटक–पटक फुट्दै र जुट्दै आएको छ । गणतन्त्रपछि समेत गणतान्त्रिक व्यवस्था स्विकार्न आनाकानी गर्दै आएका उनीहरू पछिल्लो समय राजसंस्थालाई नै अंगीकार गर्न तयार
यसअघि, एकतापछिको दलमा अध्यक्ष ‘कति जना रहने रु’ भन्नेमा मत नमिल्दा एकीकरण सम्भावना टर्न पुगेको थियो ।